ရိုးမားရောက်ရန် နီးစပ်နေသည့် မယ်ကွန်ကို ဘာစီလိုနာ ကြားဖြတ်ခေါ်ယူ၊ အပြောင်းအရွှေ့ ပျက်ပြယ်ခ?? - Yangon Media Group
ဘာစီလိုနာအသင်းသည် အစောပိုင်းက ရိုးမားသို့ရောက်ရှိရန် သေချာသလောက်ရှိခဲ့သော ဘော်ဒိုးလူငယ်ကစားသမား မယ်ကွန်ကို ကြားဖြတ် ခေါ်ယူပြီး ငါးနှစ်စာချုပ်ဖြင့် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
၂၁ နှစ်သာရှိသေးသော ဘရာဇီး တောင်ပံကစားသမား မယ်ကွန်မှာ အသင်းကြီးများက ခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရသူဖြစ်ပြီး ၎င်းအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို သဘောတူညီမှုရခဲ့ကြောင်း ဘော်ဒိုးနှင့် ရိုးမားအသင်းများက တနင်္လာနေ့တွင် အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် အင်္ဂါ နေ့၌ မယ်ကွန်ကိုခေါ်ယူရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် ဘာစီလိုနာကပါဝင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို ၄၁ သန်း ဖြင့်ခေါ်ယူကာ ၂ဝ၂၂-၂၃ ရာသီအကုန်အထိ ငါးနှစ်စာချုပ်ဖြင့် မယ်ကွန်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ဘာစီလိုနာက ကြေညာခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ရောက်ရှိရန်နီးစပ်နေ သော ကစားသမားတစ်ဦးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက် တောင်းပန်ကြောင်း ရိုးမားအားကစားဒါရိုက်တာ မွန်ချီကပြောဆိုခဲ့ပြီး သဘောတူညီမှုရထားခဲ့ပြီးမှ အခြားအသင်းထံ ရောင်းချခဲ့သည့် ဘော်ဒိုးကို တရားစွဲဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိဆိုခြင်းကို လေ့လာသုံးသပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မွန်ချီက ”ဖြစ်ပျက်သွားတာတွေက ရှင်းပြဖို့လွယ်ပေမယ့် နားလည်ဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ မယ်ကွန်မှာ ကျွန် တော်တို့လိုချင်တဲ့အရည်အသွေးတွေရှိလို့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတည်းက ဘော်ဒိုးရယ်၊ သူ့အေးဂျင့်ရယ်နဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ သုံးလေးရက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တနင်္လာနေ့မှာတော့ အားလုံးသဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရောမကို လာပြီးဆေးစစ်ဖို့ ကစားသမားကိုခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့လို့ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုလည်း စီစဉ်ထားပါပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ ကြေညာချက်ထုတ်ပေးဖို့ ဘော်ဒိုးကပြောလာလို့ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြီးနောက်မှာ ဘာစီလိုနာကလည်း စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်လာပြီး ကစားသမားကို ဆေးစစ်ခွင့်မပေး တော့ဘူးလို့ ဘော်ဒိုးကပြောလာပါတယ်။ သဘောတူညီမှုရထား ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဘော်ဒိုးဥက္ကဋ္ဌ မာတင်ကို ပြောခဲ့ပေမယ့် ဘာလက်မှတ်မှ မထိုးရသေးတာ ဖြစ်လို့ ဘာစီလိုနာထက် ပိုပေးမှ ကစားသမားကို ရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အသင်းကို မလာချင်တဲ့ ကစားသမားတွေကို ကျွန်တော်တို့ အလိုမရှိတာမှန်ပေမယ့် အေးဂျင့်တွေနဲ့ ဘော်ဒိုးဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ အများကြီးရှိထားလို့ တရားဥပဒေ အရရင်ဆိုင်နိုင်မလားဆိုတာ လေ့လာသွားမှာပါ”ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်။
Deadpool2ဇာတ်ကား၌ ဧည့်သည် သရုပ်ဆောင်နေရာမှ ပါဝင်မည့် Brad Pitt ၏ သရုပ်ဆောင်ကြေးမှာ ကော်ဖီ တစ်ခွက်သာဖြ??